နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ - တရုတ် Anrui Holding Group မှ
နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံအဓိကအား radial ဝန်ကိုထမ်းများနှင့်လည်း radial ဝန်နှင့် axial ဝန်နှစ်ဦးစလုံး၏အပြစ်ကိုခံနိုင်ပါတယ်။ ကသာသူတို့ရဲ့ radial ရှင်းလင်းရေးအလုံအလောက်ကြီးမားသောအခါ angular အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်, သူတို့ သာ. ကြီးမြတ် axial ဝန်သည်းခံနိုင် radial load.Deep groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံကိုထမ်းလာသောအခါ၎င်း၏အဆက်အသွယ်ထောင့်0င်ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ပွတ်တိုက်အားကိန်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ကန့်သတ်အမြန်နှုန်း, အရွယ်အစားအကွာအဝေးနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုး, နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအသုံးများဝက်ဝံ w ဖြစ်ကြသည်အဖြစ် ...
နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံအဓိကအား radial ဝန်ကိုထမ်းများနှင့်လည်း radial ဝန်နှင့် axial ဝန်နှစ်ဦးစလုံး၏အပြစ်ကိုခံနိုင်ပါတယ်။ ကသာသူတို့ရဲ့ radial ရှင်းလင်းရေးအလုံအလောက်ကြီးမားသောအခါ angular အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်, သူတို့ သာ. ကြီးမြတ် axial ဝန်သည်းခံနိုင် radial load.Deep groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံကိုထမ်းလာသောအခါ၎င်း၏အဆက်အသွယ်ထောင့်0င်ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ပွတ်တိုက်အားကိန်းနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ကန့်သတ်အမြန်နှုန်း, အရွယ်အစားအကွာအဝေးနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုး, စက်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအသုံးများဝက်ဝံအဖြစ်နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကိုဝက်ဝံကျယ်ပြန့်တိကျတူရိယာအတွက်အသုံးပြုနေကြတယ်, အနိမ့်ဆူညံသံမော်တာ, မော်တော်ကား, ဆိုင်ကယ်, အခြို့ကတခြားယေဘုယျစက်ယန္တရားများနှင့် စသည်တို့ ..
ပုံမှန်ဝက်ဝံ အခြေခံပညာ Load ကန့်သတ် အလုံး ဝက်ဝံ
ရှုထောင့် ratings အမြန်နှုန်း အဖြည့် အလေးချိန်
ဃ : D B, C CR ကော Gresse ဆီ အမှတ် အရွယ် အလေးချိန်
အခြေခံပညာ မီလီမီတာ မီလီမီတာ မီလီမီတာ KN KN rpm ပါ rpm ပါ မီလီမီတာ ကီလိုဂရမ်
685 ပွင့်လင်း51130,72 ၌ 0.28 46000 54000 8 1,59 0,0024
တံဆိပ်ခတ် 68551150,72 ၌ 0.28 46000 54000 8 1,59 0,0024
686 ပွင့်လင်း613 3.5 1.08 0,44 40000 50000 820,0027
တံဆိပ်ခတ် 68661351.08 0,44 40000 50000 820,0059
R4 6.35 19,05 4,98 1,48 0,62 36000 43000 8 2,38 0,005
R4A ပွင့်လင်း 6.35 19,05 5,56 2,34 0,89 34000 3000063,97 0,009
R4A ချိတ်ပိတ် 6.35 19,05 5,56 2,34 0,89 34000 4000063,97 0,009
687 ပွင့်လင်း714 3.5 1,17 0,51 39000 4900092 0,003
တံဆိပ်ခတ် 68771451,17 0,51 39000 4900092 0,003
688 ပွင့်လင်း 8 1641.33 0,59 37000 4500092,38 0,004
တံဆိပ်ခတ် 688 8 1641.33 0,59 37000 4500092,38 0,004
689 ပွင့်လင်း91741,72 0,82 35000 42000 1120,004
တံဆိပ်ခတ် 68991751,72 0,82 35000 42000 1120,004
69992062.48 1,09 34000 4000092,38 0,082
R6 ပွင့်လင်း 9,525 22,225 5,56 3.35 1,41 32000 3800073,97 0,009
R6 ချိတ်ပိတ် 9,525 22,225 7,14 3.35 1,41 32000 3800073,97 0,009
R8 ပွင့်လင်း 12.7 28,575 6.35 5.4 2,36 38000 42000 8 4,67 0,017
R8 ကိုတံဆိပ်ခတ် 12.7 28,575 7,94 5.4 2,36 38000 42000 8 4,67 0,017
R10 ပွင့်လင်း 15,875 34,925 7,14 4,61 2,77 24000 3400094,67 0,034
R10 ချိတ်ပိတ် 15,875 34,925 8,73 4,61 2,77 24000 3400094,67 0,034
6906 30 4797.28516000 19000 14 4,76 0,048
6213 65 120 23 ပမာဏ 58.5 40.5 55000 7000 10 16,67 0.99
ယခင်: WWIP3 Pack နည်းလမ်း
ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး Ball ကိုဝက်ဝံ
8AT ဂြိုဟ်တောင်တော်အမွေးရိုး -2
ဆောင်သော 8AT 3008 နှစ်ချက်တန်း angular အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကို